आज माघे संक्रान्ति - Mardi News
१ माघ २०७७, बिहीबार ०६:४३ मर्दी न्यूज
Tharu community women in traditional attire dance during Maghi festival celebrations, in Chabahil, Kathmandu, Nepal, Tuesday, Jan. 15, 2019. The festival marks the New Year of the Tharus which is one the major ethnic groups in Nepal. POST PHOTO:PRAKASH CHANDRA TIMILSENA/KANTIPUR
सौर्य मासअनुसार माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे (मकर) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, जप, तप, ध्यान साधना, दान आदि गरी मनाइँदै छ ।
सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने सङ्क्रान्ति भएकाले माघ १ गतेलाई माघे(मकर) सङ्क्रान्ति भनिन्छ । सरकारले आज देशैभरी सार्वजनिक बिदा दिएको छ। थारु समुदायले आज धुमधामसँग माघी पर्व मनाउँदै छन्।
तराईवासीले माघ १ गतेलाई नहानअर्थात् नुहाउने पर्वका रुपमा मनाउँछन् । वर्षभर ननुहाउनेले पनि आज अनिवार्य नुहाउनुपर्ने मान्यता छ। माघे सङ्क्रान्तिका दिन घ्यू, चाकु, तिलका परिकार, तरुल, पालुङ्गो, खिचडी आदि खाने चलन छ । यी परिकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने भएकाले चिसो समयमा पर्ने पर्वमा ताता परिकार खाने गरिएको हो।
माघ महीनामा माघ माहात्म्यको पनि ठूलो महत्व छ । स्कन्द पुराणको माघ माहात्म्यअन्तर्गत केदारखण्डको कुमार र अगस्त्यबीच भएको संवादअर्थात् स्वस्थानी सुन्ने सुनाउने क्रम पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि शुरु हुन्छ । यो क्रम माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म जारी रहन्छ । यस वर्ष अधिकमास (मलमास) कारण पौष शुक्ल पूर्णिमा केही दिनपछि परेको छ।
Previous प्रधानमन्त्री सुगाद्वारा थप सात प्रान्तमा आपतकाल घोषणा
Next राष्ट्रिय एकता थप सुदृढ पार्न मद्दत पुगोस् : राष्ट्रपति